USolwazi u-Rajendra Rajaram, uMholi Wezifundo eSikoleni Sokuhlela Amabhuku Ezimali, Ezomnotho neZezimali.Click here for English version
Lolu hlelo luholwa yiMnyango Wezohlwebo, Izimboni nokuQhudelana neNational Treasury ngaphansi kweso elibukhali leHhovisi likaMengameli. NeBhange Lomhlaba likhona kuloluhlelo
Injongo ye-Working Group (1) wukucacisa nokuqhakambisa uhlelo lokuhlenga amabhizinisi kubalingani ukuze babukwe ngeso elihle; (2) ukuhlela imibandela engabophezeli engalandelwa ngabakweletayo nababolekisi kungasetshenziswa izinkantolo; (3) ukuqinisa izinhlelo ezikhona; (4) ukuhlela kabusha imigomo yokuhlenga amabhizinisi awayo nezindlela ezingcono ezibheka namalungelo ababolekisi, (5) nophucula ukusebenza kwenqubomgomo.
‘UPhiko luhlose ukuthuthukisa umnotho ngokwenza ngcono amathuba okuphumelela kokuhlenga amabhizinisi. Sihlose ukwenza lokhu, kwezinye izinto, ngocwaningo oluqhubekayo nezifundo ezimfishane ngokuhlengwa kwamabhizinisi,’ kusho u-Rajam.
Ebongela u-Rajaram ngalempumelelo, uSolwazi uMabutho Sibanda, iDini neNhloko yeSikole sezoKuhlelwa Kwamabhuku, Ezomnotho neziMali, uthe: ‘Siyisikole sijabule ngokuqokwa kukaSolwazi u-Rajaram njengelungu le-Technical Working Group on Resolving Insolvency. Simfisela okuhle kodwa emsebenzini wakhe ekuthuthukiseni isizwe kulo mkhakha.’